Ungasenza Kanjani Isitimela Sokuzijabulisa Ngisho Nesabelomali Esiningi Kakhulu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Ungasenza Kanjani Isitimela Sokuzijabulisa Ngisho Nesabelomali Esiningi Kakhulu
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 24/10/2020)
Ukuhamba ngesitimela kuyinto ejabulisayo enikeza inqwaba yemivuzo. Izitimela zikulethela eduze nezwe: ngeke ubone umhlambi wezimvu udla noma uphefumula ngephunga lenkambu yama-tulips esihlalweni esiphakathi se-Airbus. Izitimela zingakushayela emaphethelweni futhi ukukufaka maphakathi nedolobha ngokushesha. Ungazelula futhi uphumule futhi uxoxe kusuka ku ibanga elinethezekile nabahamba nabo lapho uhamba ngesitimela. Abanye bangathi ukuhamba ngesitimela kungumvuzo waso ngoba njalo uma sigibela isitimela, sisiza ukusekela imboni ebalulekile kanye nesiko elinempilo. Kepha namhlanje silapha ukuzokhuluma ngolunye uhlobo lomvuzo — olungakusiza thatha ukugibela izitimela okuningi futhi ubone i-swath ebanzi kakhulu yomhlaba noma ukuthi ungayenza kanjani i-adventure yesitimela ibe nobungane besabelomali nangaphezulu. Luhlobo lwemivuzo ekhishwa izinkampani zamakhadi wesikweletu ohambo. Futhi ukuwaqoqa kungaba isu elihlakaniphile lokuxhasa amaholide ophupha ukuwathatha.
1. Ungasenza Kanjani Isitimela Sokuzijabulisa Ngisho Nesabelomali Esiningi Kakhulu: Amakhadi Esikweletu Sokuhamba Ahlukile
Abantu ngokuvamile bagcina amakhadi wesikweletu wendabuko kuzikhwama zabo zezizathu ezimbalwa. Ngezinye izikhathi siphatha ikhadi lesikweletu ukuze nje sigweme ukuba nemali eningi emaphaketheni ethu — umkhuba ongaba yingozi, ikakhulukazi lapho sihamba. Amakhadi esikweletu futhi asisiza ukukhokhela ukuthenga esingenakukwazi ukukukhokhela konke ngasikhathi sinye, kungaba yizidingo noma abahle. Lowo mkhuba wokuqala uyindlela enhle yokusebenzisa isikweletu sokuhamba. Empeleni, indlela engcono yokuthola imivuzo ekhadini lakho lesikweletu lokuhamba ukuyisebenzisa kaningi, ikakhulukazi ukuthenga okukhulu. Kepha umkhuba wesibili ungaba yingozi lapho usebenzisa ikhadi lesikweletu lokuhamba. Kungani? ngoba, ngenkathi i- isilinganiso senzalo esimaphakathi esikhokhiswa imboni yekhadi lesikweletu sekukonke — futhi ungathola abaningi abakhokhisa kancane — kuyinto 14.52%, amanye amakhadi wesikweletu sokuhamba abiza ngaphezulu 25%. Futhi abaningi bakhokhisa imali eshisiwe yonyaka ngaphezulu kwalokho. Ukuthwala ibhalansi ephezulu ekhadini lesikweletu lokuhamba kuzokhipha imali yakho yenzalo ngokushesha. Ngakho-ke umthetho wokuqala wokusebenzisa ikhadi lesikweletu lokuhamba ungalokothi ukhokhise imali ethe xaxa kulo kunokuba ukwazi ukukhokha kumjikelezo owodwa wokukhokha.
2. Izinzuzo Zokusebenzisa Ikhadi Lesikweletu
Izinkampani zamakhadi wesikweletu sokuhamba zikhathazekile ngokuba nebhizinisi lakho. Bancintisana nezinye izinkampani ukuze bayithole. Ukunikela ngohlelo lomvuzo oluyingqayizivele futhi olunamandla kuyindlela eyinhloko abazihlukanisa ngayo emakethe nokuheha amakhasimende.
Izinzuzo ziqhuba i-gamut. Ezinye izinkampani zikuklomelisa ngamamayela okundiza kaningi. Ake sithi ungumuntu waseNew York ohlela uhambo lokunambitha iBordeaux, ingxenye yokuqala yohambo lwakho cishe indiza eya eParis — okungenzeka ibe yizindleko ezinkulu kakhulu ohambweni lwakho. (Lokho ngaphandle kokuthi unambitha imishanguzo engavamile kakhulu!) Amamayela okuhamba njalo ohamba kuwo angakuthenga lelo thikithi lendiza. Ezinye izinkampani zamakhadi wesikweletu sokuhamba zifaka amathikithi ohamba nawo wonyaka njengengxenye yesakhiwo sabo somvuzo, ukuze ukwazi ukuletha umngane ku-adventure. Ezinye izinkampani zinikela ngemivuzo engenza indiza yakho ibe mnandi kakhulu, kusukela ekuthuthukisweni kwesigaba sokuqala kuya ekufinyeleleni okukhethekile ezindaweni zokuphumula zezindiza ezikhumulweni zezindiza emhlabeni wonke. Izaphulelo emahhotela nasezindaweni zokudlela nazo ziba ngesakhiwo somvuzo wamakhadi wesikweletu wokuhamba athile.
3. Ungasenza Kanjani Isitimela Sokuzijabulisa Ngisho Nesabelomali Esiningi Kakhulu: Ukukhethwa Kwethu Kwezinzuzo
Inzuzo eguquguqukayo kunazo zonke ongayithola ukubuyisela imali emuva ekuthengeni kwakho. I amakhadi wesikweletu wokuhamba angcono kakhulu khokha 2% buyela kukho konke okuthengile. Abanye bandisa amaphesenti abo okubuyisa imali aze afike kokungama- 6% ezigabeni ezikhethiwe, kufaka phakathi indiza, yokudlela, nokuthengwa kwamahhotela. Uma usebenzisa ikhadi lakho lesikweletu njalo, noma ukhokhela izinto zansuku zonke ezifana negilosa negesi — imivuzo yemali ingangeza ngokushesha futhi isetshenziselwe ukukhipha noma yiziphi izindleko zokuhamba ozithandayo, kufaka phakathi ukudlula kwakho okulandelayo kwesitimela. Kepha futhi, kunengqondo ukusebenzisa ikhadi lakho lesikweletu ngale ndlela uma ulungele ukukhokha ibhalansi yakho njalo ngenyanga.
4. Amathiphu Okukhetha Ikhadi Lesikweletu
Amakhadi esikweletu wokuhamba avame ukusebenzisa uhlobo oluthile lwamaphoyinti ukubala imivuzo oyitholayo futhi lezi zinhlelo zivame ukuba nzima. Ngaphezu kwalokho, amanye amakhadi abeka isidingo sokuthenga esincane ngaphambi kokuthi uthole amaphuzu nhlobo. Ngokwesibonelo, kungadingeka ukuthi wenze ifayili le- $1000 noma ngaphezulu ekuthengeni esikhathini esiyizinyanga ezintathu ngaphambi kokuthi uqale ukuthola amaphuzu. Ukubeka ithikithi lendiza ekhadini lakho lesikweletu lokuhamba kuyindlela elula yokuhlangabezana nobuncane. Kepha ungahlangabezana nayo ngokusebenzisa ikhadi lakho izinyanga ezimbalwa ukukhokhela izindleko zansuku zonke. Vele uqiniseke ukuthi ugcina umkhondo wokuthengiwe kwakho ukuze uqiniseke ukuthi usendleleni inyanga ngayinye ukufinyelela umgomo wakho wokusebenzisa imali.
Ukubheja kwakho okuhle kakhulu ukuqhathanisa ngalinye lamakhadi owacabangayo ngama-aphula. Ungahle ufune ukudala ispredishithi ngale njongo ukuze uqiniseke ukuthi uthwebula zonke izici zekhadi ngalinye futhi wenza ukuqhathanisa okulungile. Qiniseka ukuthi ufaka ama-APR enzalo, izidingo zokuthenga eziphansi, amaphesenti okubuyisa imali, kanye nemali ekhokhwayo yonyaka ekhokhiswa ikhadi lakho ekubaleni kwakho.
5. Ungasenza Kanjani Isitimela Sokuzijabulisa Ngisho Nesabelomali Esiningi Kakhulu: Incomo Eyodwa Yokugcina
I-Wanderlust ingaba yisifiso esingenakuphikiswa. Njengochwepheshe bezokuvakasha, sikunxusa ukuthi usebenzise isikweletu ngendlela efanele. Futhi, sikucela ukuthi ubheke umthwalo wakho wemfanelo emhlabeni. Ukwenza izinketho zokuhamba ezinomthelela ophansi kwezemvelo, njenge ehamba ngesitimela esikhundleni semoto ukuhlola indawo oya kuyo elandelayo, kungenye yezindlela zokuhamba ngenkathi uthembekile ezimisweni zokusimama.
Lapha e Londoloza Isitimela, we will be happy to help you plan your vacation in Europe by train.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Ungasenza Kanjani Isitimela Sokuzidela Nebanga Elihle Kakhulu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/train-adventure-budget-friendly/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila yethu ethandwa kakhulu yezitimela - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / pl ukuba / fr noma / de futhi ngezilimi ezingaphezu.
BudgetFriendly CreditCards TrainAdventure Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi TravelCreditCards
USusan Doktor uyintatheli futhi ungusomaqhinga kwezebhizinisi odabuka eNew York City futhi ohambe kakhulu ngesitimela. Ubhala ngezihloko ezahlukahlukene, kufaka phakathi ezezimali, travel, nokudla newayini. Follow her on Twitter @branddoktor or you can click here to ngithinte